Tipping Peloton Delivery – Answered!
घर / उत्तर अमेरिका, Peloton डेलिभरी, क्षेत्र, सेवा, संयुक्त राज्य अमेरिका / टिपिंग प्यालेटन डेलिभरी
टिपिंग प्यालेटन डेलिभरी
1 टिपिंग प्यालेटन डेलिभरी
1.1 Peloton अनुभव को लागी परिचय
2 Peloton डेलिभरी
2.1 डेलिभरीको लागि परिचय
2.2 COVID-19: Peloton ले सम्पर्क रहित वितरण प्रदान गर्दछ?
2.3 Peloton ढुवानी समय: Peloton डेलिभरीको लागि कति लामो?
2.4 Peloton बाइक कसले दिन्छ?
2.5 त्यहाँ कतिजना प्यालेटन डेलिभरी साथीहरू छन्?
2.6 Peloton डिलिभरीले के गर्छ?
3 के मैले प्यालेटन डेलिभरी सल्लाह दिन आवश्यक छ?
4 मैले प्यालेटन डेलिभरीको लागि कति टिप गर्नुपर्छ?
तपाईंले प्यालेटन बाइकको अर्डर गर्नुभयो। बधाई छ! अब तपाईंले केवल प्यालेटन डेलिभरी टीम वा उनीहरूको तेस्रो पार्टी डेलिभरी सेवा XPO को लागि पर्खनु पर्दछ र आएर आफ्नो बाइक सेट अप गर्नुहोस्। तपाईं कुनै समय मा साइकलिंग हुनेछ!
Peloton अनुभव को लागी परिचय
Peloton एक अद्वितीय, प्रीमियम साइक्लि experience अनुभव हो जुन दिन भर उपलब्ध Peloton कक्षाको वरिपरि घुमाउँदछ, या त प्रत्यक्ष कक्षाको रूपमा वा घण्टा पछि कक्षाको पुस्तकालयबाट। पेलेटन स्टुडियोका केहि अविश्वसनीय प्रेरणादायक र लोकप्रिय पालोटन प्रशिक्षकहरू द्वारा कक्षाहरू सिकाईन्छ र यसलाई माथि जानको लागि, तपाईंले पाठ्यक्रममा अरूहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईंले प्रतियोगिता सेट गर्नुभयो, निश्चित रूपमा, यो पूरा वर्ग वा तपाईंको उमेर र लि gender्ग समूह हो। यो तपाईंको आफ्नै बैठक कोठाको आराममा भित्री साइकलिंग कक्षा हो र यो आफ्नैमा वा तपाईंको व्यायाम उपकरणको एक भागको रूपमा महान हो।
यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि पालोटन वर्गहरू के हो जसले प्यालटनलाई यति विशिष्ट बनाउँछ। दुर्भाग्यवश, तिनीहरू मात्र उपलब्ध छन् यदि तपाईंसँग मासिक have 39 को लागत मा Peloton सेवा को सदस्यता छ। यो Peloton स्टेशनरी बाइक को एक नकारात्मक पक्ष हो, जुन मासिक सेवा बिना धेरै कम कार्यात्मक छ। त्यसकारण प्यालोटन बाइकको कति लागत छ (model १,1,895 39 plus प्लस कर आधार मोडेल र कुनै सामानहरू बिना), तपाईले प्रतिमाह $ pay pay (प्रति वर्ष ($468 per) तिर्नुपर्नेछ जबसम्म तपाईं यी सबैबाट फाइदा लिन चाहानुहुन्छ तपाईको Peloton प्रस्ताव।
Peloton बाइकको मूल्य कति छ? आधार मोडल १$ $ plus प्लस कर र सामानहरू हो। यदि तपाइँ तपाइँको Peloton १० बर्षको लागी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, कुल लागत मासिक Peloton सेवा को लागी $ 1895$10० + tax १4680 + tax + कर + सामानहरू हुनेछ भने $ 1895$6575 + + कर + सामानहरू। 6575 XNUMX$XNUMX। महँगो छ तर जिमहरू र अस्वस्थ पनि छन्। केही लेखहरूले सुझाव दिएका छन् कि प्यालोटनले उनीहरूको बाइकलाई मूल्यमा बेच्दछ, जबकि प्यालोटन क्लासहरूमा पैसा कमाउँदछ, सदस्यता जुन तपाईको प्यालोटन बाइकले प्रस्ताव गर्ने सबैबाट फाइदा लिन आवश्यक छ।
तपाईलाई यो चाखलाग्दो हुन सक्छ कि प्यालोटन कक्षा धेरै लाभदायक छ किनकि त्यहाँ एउटा वर्ग उत्पादन गर्न निश्चित लागत छ, तर कक्षामा भाग लिने प्रत्येक अतिरिक्त ग्राहकको लागि आवश्यक छैन। परम्परागत साइक्लि class कक्षामा, एक साइकलिंग प्रशिक्षक कसरत स्थानको साइज र बाइकहरूको संख्यामा सीमित छ। यहाँ त्यस्तो स्थिति छैन, किनकि एक पालोटन प्रशिक्षकले हजारौं साइकिल चालकहरूसँग सत्रमा राख्न सक्दछन् र उनीहरूलाई रेकर्ड गरिएको सत्रको लामो पछाडि पुग्न सक्छन्। यो एक उत्तम व्यापार मोडेल हो र तपाईंलाई तपाईंको घरमा पनि एक उत्तम कसरत दिन्छ!
डेलिभरीको लागि परिचय
Peloton ले तपाईंको Peloton बाइक तपाईंको घरमा प्रदान गर्दछ र तपाईको लागि सेट अप गर्दछ, कुनै अतिरिक्त लागत बिना। तपाईं दिन १ देखि आफ्नो Peloton बाइकको मजा लिनुहुनेछ!
कुनै इन-स्टोर पिकअप विकल्पहरू छैनन् वा बाइकलाई तपाईंको घरमा शिपिंग गर्ने र आफैं स्थापना गर्ने सम्भावना छैन। स्थापनासँग डेलिभरीले पेल्टनको दृष्टिकोणबाट अर्थ राख्छ किनकि यसले सबै पेलोटन साइकिल चालकले बाइकलाई राम्रोसँग सेट अप गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दछ, जसले कम रकम फिर्ता लिन मद्दत गर्दछ र समग्र ग्राहक सन्तुष्टिको सुधार गर्दछ। यदि तपाई अझै पनी चाहानुहुन्छ कि तपाई आफैं सँगै राख्न सक्नु हुन्छ, दिमागमा राख्नुहोस् कि प्यालोटन बाइक १135 एलबी तौलको छ भने यसलाई प्यालोटन डिलिभरी साथीहरुमा छोड्नु पक्कै पनि त्यस्तो खराब विकल्प छैन।
COVID-19: Peloton ले सम्पर्क रहित वितरण प्रदान गर्दछ?
हो, Peloton आफ्नो वितरण तरीका परिवर्तन गरिएको छ तपाईंको नयाँ बाइकको सम्पर्कविहीन वितरणको लागि तपाईंको घरमा। तपाईको घरमा खर्च गरेको समयलाई न्यूनतम गर्नको लागि, बाइक पूर्व-भेला हुनेछ। एकचोटि तपाईंको नयाँ Peloton बाइक स्थानमा आए पछि, वितरण टोलीले यसलाई खाली गर्दछ। कुनै हस्ताक्षर आवश्यक छैन।
Peloton ढुवानी समय: Peloton डेलिभरीको लागि कति लामो?
Peloton डिलिभरी टाइमफ्रेमहरू तपाई कहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ र जब तपाइँ अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा आधारित हुन्छ।
वर्तमान प्यालेटन शिपिंग समयहरू:
बाइक: १-२ हप्ता
बाइक +: १-२ हप्ता
यात्रा: एक रिकल को कारण, यो पैदल हालै पठाइएको छैन। एकचोटि बिक्री फेरि सुरु भएपछि delivery--3 हप्तामा डेलिभरीको आशा गर्नुहोस्।
ट्रेड +: एक रिकलको कारण, ट्रेड + अहिले पठाइएको छैन। एकचोटि बिक्री फेरि सुरु भएपछि delivery--3 हप्तामा डेलिभरीको आशा गर्नुहोस्।
उच्च मागको विगत अवधिहरूमा, पैलोटनको ढुवानी बढ्यो।
Peloton बाइक कसले दिन्छ?
तपाईंको Peloton बाइक डेलिभर र Peloton डेलिभरी टीम वा एक तेस्रो पार्टी डेलिभरी सेवा द्वारा स्थापित हुनेछ जुन हाल XPO लॉजिस्टिक छ।
त्यहाँ कतिजना प्यालेटन डेलिभरी साथीहरू छन्?
त्यहाँ २ देखि delivery डिलिभरी मानिसहरू हुन्छन् यदि तपाईं टिप छोड्न चाहानुहुन्छ भने, प्रत्येक व्यक्तिको लागि व्यक्तिगत रूपमा टिप छोड्न सधैं राम्रो लाग्छ त्यसैले साना बिलहरू काम लाग्नेछ।
Peloton डिलिभरीले के गर्छ?
Peloton ले तपाईंको घरमा प्रि-एसेम्ब्ले गरिएको बाइक प्रदान गर्दछ, यसलाई तपाईंको मनपर्ने कोठामा राख्दछ, पावर तपाईंको बाइकमा र जाँच गर्नुहोस् कि टचस्क्रीनले काम गर्दछ, र तपाईंको बाइक स्थिर गर्दछ। त्यसो भए, तिनीहरूले यसलाई मेटाउने छन् र निर्देशनहरू छोड्नेछन् कि कसरी तपाइँको खाता सक्रिय गर्ने। एक पटक जब तिनीहरूले तपाईंको बाइक स्थापना गरिसकेका हुन्छन्, तिनीहरूले सबै प्याकेजिंग सामग्रीहरू पनि लैजान्छन्। यो सेतो पन्जा वितरण सेवा हो।
के मैले प्यालेटन डेलिभरी सल्लाह दिन आवश्यक छ?
पालोटनका अनुसार सुझावहरू तपाईंको विवेकमा छन्। त्यसो भएन, तपाईले आफ्नो प्यालेटन डेलिभरी टिप्स दिनुपर्दैन तर सुझावहरू सँधै मानिन्छन्। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले एउटा सल्लाह नछोड्नुहोस् जबसम्म तपाईको डेलिभरी टीम माथि र पछाडि गयो। यो याद राख्नुहोस् कि तपाईले पहिले नै पालोटन बाइकलाई तपाईको घरमा डेलिभर गर्न र तपाईको घरमा सेट अप गर्न भुक्तान गरिरहनु भएको छ, यदि यो अहिले बाइकको मूल्यमा निर्मित छ भने $ २ at० छुट्याएर अलग चार्ज गर्नुको सट्टा पहिले जस्तो थियो।
त्योले भन्यो, धेरै व्यक्तिले प्यालेटन डेलिभरी टिप्स गर्छन्। एक टिप छोड्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि तिनीहरूले तपाईंलाई असाधारण सेवा दिए।
मैले प्यालेटन डेलिभरीको लागि कति टिप गर्नुपर्छ?
तपाईंको प्यालेटन डेलिभरी टीमलाई टिप्सिंग पूर्ण रूपमा वैकल्पिक हो र तपाईंको आफ्नै विवेकमा। यदि तपाईं टिप छोड्न चाहानुहुन्छ भने, स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् $ २० तपाईंको प्यालेटन बाइक सेटअप गरिसकेपछि। दिमागमा राख्नुहोस् कि त्यहाँ सामान्यतया २ र कहिलेकाँही delivery डिलिभरी व्यक्ति हुन्छन्, त्यसैले यसले केहि सानो बिलहरू लिन मद्दत गर्दछ ताकि यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ।
बाइकसाइकलडेलिभरी साथीहरुव्यायामPelotonPeloton डेलिभरीटिपिङसुझावकसरत उत्तर अमेरिकाPeloton डेलिभरीक्षेत्रसेवासंयुक्त राज्य अमेरिका